Kụziere Ndị Na-agụ Akwụkwọ Gị Ihe | Martech Zone
Kụziere Ndị Na-agụ Akwụkwọ Gị Ihe
Sunday, December 10, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Anyị niile malitere ebe!
Anọ m na-agwa enyi m n'abalị a gbasara Social Networking na ọdịnihu m na thelọ Ọrụ. Enwere m ezigbo nri ehihie na ezigbo enyi na Pat Coyle izu gara aga. M na mgbe a technologist… Jack nke niile trades, nwe onye ọ bụla… ruo mgbe na-adịbeghị anya. N'afọ gara aga, elebara m anya na mmalite nke Internetntanetị.
Ahịrị mkparịta ụka, pịa pịa, ahịa, ozi ọma na mkparịta ụka na-agbacha agbacha. Uzo nke teknuzu dikwa, ya na XML, RSS, ịde blọgụ na SEO. Ọsọ anyị na-agagharị dị egwu. Enweghị ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu nke nwere ike mepee ụzọ. Ngwa ngwa ị na-ahazi usoro ọmụmụ, ọ ga-abụ na ọ gafeela. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere ndị mmadụ dịka m nọ na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe dị mkpa.
My blog ọdịnaya dịgasị n'etiti mbido na elu na nzube. M na-agbanye onwe m ịkụziri, nnwale, ma nwalee nyiwe na teknụzụ niile kachasị ọhụrụ ka m wee nọrọ n'ọnọdụ ntụkwasị obi na nka n'etiti ndị ọgbọ m. Ruo ugbu a, dị mma… Ana m enweta otuto ahụ!
Agaghị m amụta ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka isi mmalite ndị ọzọ ịkekọrịta ahụmịhe ha n'ịntanetị. Ọ bụ ihe mere m ji eme ya ka ọ bụrụ na m na-enye onye mbido echiche. Onwere onye weputaram oge m choro ilaghachi azu! Mụta maka ihe a nwere ike imenye ụjọ, Achọrọ m ịgba ndị mmadụ ume, emela ihere ma kwụsị ha. Offọdụ n'ime unu nwere ike ịgụ ụfọdụ ntinye m wee sị, "Mba!". Nke ahụ dị mma… naanị na-arapara n'ahụ m, anyị ga-alaghachikwa n'ọkwa gị n'oge na-adịghị anya.
Nke ahụ bụ n'ezie isi okwu nke blọọgụ m. Ọ ga-amasị m ịme karịa ịghachigharị njikọ na akụkọ - Achọrọ m ikwu okwu site n'ọnọdụ ga-akụziri ndị ọzọ ka ha nwee ike ịme mkpebi. N'ime narị otu narị nri m na-agụ, enwere pere mpe nke bara uru na onye njedebe ma ọ bụ azụmaahịa. Achọrọ m ịbụ nyo maka na Ama, gị na-ajụ, gị ndu.
Kedu ka m si eme? Echekwala nkatọ… Enwere m narị mmadụ ole na ole na-aga na saịtị ahụ kwa ụbọchị, mana ole na ole na-aza ajụjụ. Pasent 20 + nke gị na-abịaghachi ugboro ugboro. Kedu ihe m ga-eme nke ọma? Achọrọ m ịma! Ọzọkwa, Achọpụtara m na enwere ọtụtụ nleta sitere na mpụga US Ọ ga-amasị m ịnụ nzaghachi gị!
Nke a bụ akara ọhụụ maka ndị ọhụụ na ahụmịhe ahụ. Ugbu a aga m ejide n’aka itinye ndụmọdụ n’agụ akụkọ mkpirisi ọ bụla nke ndị ọhụụ ọhụrụ nwere ike ghara ịghọta. IMHO, nke a bụ obere njirimara imewe nke weebụsaịtị. Ọ bụghị njikọ, mana ọ na-enye ntakịrị nkọwa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ aghọtaghị ihe mkpirisi okwu ma ọ bụ ahịrịokwu pụtara site na ị na-egwu ya.
Nke a bụ otu esi eme ya (emelitere ekele site n'ọnụ ndị na-agụ ya acronym mkpado):
I nwekwara ike ime nke a na a oge mkpado iji aha mmewere:
Ekwenyesiri m ike na m nwere ike ịtụba bọtịnụ nchịkọta akụkọ ọhụrụ ma ọ bụ klaasị n'ime WordPress iji mee ya… ma eleghị anya, otu ụbọchị n'oge na-adịghị anya!
Daalụ ọzọ maka ịgụ ihe! Cheta na anyi nile bidoro ebe! Kụziere ndị na-agụ akwụkwọ gị ihe.
Tags: acronymacronym mkpadokụziere ndị na-agụ akwụkwọ iheezumikehover ederedeoke isimkpado na-adịruna-adịru aha
Abụ m onye SOB (Na-etu ọnụ)!
Blog Tag: 5 Nzuzo banyere Me
Dee 11, 2006 na 12: 44 AM
Echere m na blọgụ gị dị mma. M na gburugburu a ugboro ole na ole na-agụ gá »‹ posts otú m chere na á »‹ na-eme ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na, ka emechara, ị nwere ndị na-agụ laghachiri ọzọ…… anaghị aga nke ọma?
Debe ezigbo ọrụ.
Dee 11, 2006 na 5: 52 AM
jiri acronym mkpado maka nke a.
inline styling bụ ihe kacha njọ i nwere ike ime, becouse ma ọ bụrụ na ị chọrọ gbanwee gị acrony styling (ị chọrọ ịgbanwe si kụriri ka dotted akara ihe atụ) ị ga-agbanwe ọ bụla otu acronym.
styling acronym mkpado na gị .css faịlụ dị mfe.
Otu ihe ọzọ: ndị na-agụ ihuenyo maka ndị ìsì ga-arụ ọrụ nke ọma na saịtị gị, ọ bụrụ na ị jiri akara xhtml ziri ezi maka ihe ziri ezi.
Dee 11, 2006 na 10: 18 AM
Daalụ nke ukwuu! M ga-ede akwụkwọ banyere ịde blọgụ nke ọma n'oge na-adịghị anya. Anaghị m eji stats na ego enweta ya. Ọ bụ n'ezie ihe dị mma ikwu dị ka nke gị.
Dee 11, 2006 na 10: 19 AM
Daalụ maka nke ahụ! Agụgoro m gbasara aha mkpirisi ahụ n'oge gara aga mana ọ kpachapụrụ anya banyere iji ya. Agbanyeghị, ebe ọ dị ka ọ ga-ekwe omume XHTML na ọkọlọtọ standard Aga m enye ya ogbugba.
Dee 11, 2006 na 10: 27 AM
Emelitere ihe acronym mkpado ekele hey!